5G ဆိုတာ ဘာလဲ ??? | MyTech Myanmar
5G ဆိုတာ ဘာလဲ ???
5G ဆိုတာက Cellular Mobile Communications ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်မျိူးဆက်ဖြစ်သလို 4G (LTE) ရဲ့ မျိူးဆက်သစ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
5G Network က 4G ထက် အဆပေါင်းများစွာ မြန်ဆန်လာမယ့် နည်းပညာဖြစ်ပြီး၊ Theory တွေအရဆိုရင် 5G ရဲ့ Speed က 1 Gigabits per Second ကနေ 10 Gigabits per Second အထိ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ 4G Network ရဲ့ Download Speeds က 100 Megabits per Second သာ ရှိပြီး Megabyte နဲ့ ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင် 12.5 MB/s သာရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တကယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ 5G Network ဟာ 4G Network ထက် အနည်းဆုံး ၁၀ဆ ကနေ အဆ၂၀ အထိပိုမြန်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ Qualcomm နဲ့ Samsung တို့လိုမျိူး နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ အဆိုများသာ ဖြစ်ပြီး Huawei ကတော့ 5G Network ဟာ 8GB ပမာဏရှိတဲ့ HD Movie တွေကို ၆စက္ကန့်နဲ့ Download လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်း တွက်ချက်ထားပါတယ်။ 8GB ပမာဏရှိတဲ့ HD ဗီဒီယိုတွေကို 4G Network နဲ့ Download လုပ်မယ်ဆိုရင် ၁၁မိနစ်ခန့် ကြာမှာဖြစ်ပြီး 3G Network နဲ့ ဆိုရင်တော့ ၁နာရီကျော်ကျော် ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
5G Network ကို တချိူ့နိုင်ငံတွေမှာ စမ်းသပ်နေပြီ ဖြစ်သလို Smartphone Manufacturer တွေ ဘက်ကလည်း Qualcomm ရဲ့ X50 Modem ကို အသုံးပြုပြီး လာမယ့် ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ 5G Network Support ပေးတဲ့ဖုန်းတွေကို ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ 5G ဖုန်းကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်တောင်မှ Mobile Operator တွေဘက်ကလည်း ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်သေးတာကြောင့် 5G Network ရဲ့ အနှစ်သာရကို ၂၀၂၀ နှောင်းပိုင်းကျမှပဲ ခံစားနိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
5G ဆိုတာက Cellular Mobile Communications ရဲ့ ပဉ်စမမွောကျမြိူးဆကျဖွဈသလို 4G (LTE) ရဲ့ မြိူးဆကျသဈလို့ ပွောမယျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
5G Network က 4G ထကျ အဆပေါငျးမြားစှာ မွနျဆနျလာမယျ့ နညျးပညာဖွဈပွီး၊ Theory တှအေရဆိုရငျ 5G ရဲ့ Speed က 1 Gigabits per Second ကနေ 10 Gigabits per Second အထိ ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ လောလောဆယျ ကြှနျတျောတို့ အသုံးပွုနတေဲ့ 4G Network ရဲ့ Download Speeds က 100 Megabits per Second သာ ရှိပွီး Megabyte နဲ့ ပွနျတှကျမယျဆိုရငျ 12.5 MB/s သာရှိပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး တကယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာတော့ 5G Network ဟာ 4G Network ထကျ အနညျးဆုံး ၁၀ဆ ကနေ အဆ၂၀ အထိပိုမွနျလာမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ ဒါတှဟော Qualcomm နဲ့ Samsung တို့လိုမြိူး နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီးတှရေဲ့ အဆိုမြားသာ ဖွဈပွီး Huawei ကတော့ 5G Network ဟာ 8GB ပမာဏရှိတဲ့ HD Movie တှကေို ၆စက်ကနျ့နဲ့ Download လုပျနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျး ခနျ့မှနျး တှကျခကျြထားပါတယျ။ 8GB ပမာဏရှိတဲ့ HD ဗီဒီယိုတှကေို 4G Network နဲ့ Download လုပျမယျဆိုရငျ ၁၁မိနဈခနျ့ ကွာမှာဖွဈပွီး 3G Network နဲ့ ဆိုရငျတော့ ၁နာရီကြျောကြျော ကွာမှာ ဖွဈပါတယျ။
5G Network ကို တခြိူ့နိုငျငံတှမှော စမျးသပျနပွေီ ဖွဈသလို Smartphone Manufacturer တှေ ဘကျကလညျး Qualcomm ရဲ့ X50 Modem ကို အသုံးပွုပွီး လာမယျ့ ၂၀၁၉ခုနှဈမှာ 5G Network Support ပေးတဲ့ဖုနျးတှကေို ထုတျလုပျနိုငျဖို့အတှကျ ပွငျဆငျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ 5G ဖုနျးကို လကျဝယျပိုငျဆိုငျနိုငျတောငျမှ Mobile Operator တှဘေကျကလညျး ထောကျပံ့မှုလိုအပျသေးတာကွောငျ့ 5G Network ရဲ့ အနှဈသာရကို ၂၀၂၀ နှောငျးပိုငျးကမြှပဲ ခံစားနိုငျဖှယျ ရှိပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-11-08T14:57:09+06:30November 8th, 2018|Mobile Phones, News, Technology|